Itoobiya waxay $ 160m ka heshay AfDB si ay ula dagaallanto COVID-19, – Beegsonews-Wararka maanta
Home WARARKA MAANTA Itoobiya waxay $ 160m ka heshay AfDB si ay ula dagaallanto COVID-19,
Itoobiya waxay $ 160m ka heshay AfDB si ay ula dagaallanto COVID-19,
Dadaalka Ethiopia ee lagula dagaallamayo coronavirus-ka ayaa soo kordhay ka dib markii Bangiga Horumarinta Afrika (AfDB) uu oggolaaday deeq $ 165.08 milyan ah oo lagu taageerayo waxqabadka bulshada Bariga Afrika ee ku aaddan saameynta caafimaad iyo dhaqaale ee masiibada COVID-19.
Sida laga soo xigtay Madaxa AFDB ee Waddanka Itoobiya, Abdul Kamara, lacagtani waxay gacan ka geysan doontaa xoojinta nidaamka caafimaadka ee Itoobiya, oo ay weheliso kuwa kale ee Afrika, oo loo saadaaliyay inay la halgamayaan la tacaalida tirada sii kordheysa ee kiisaska COVID-19.
Xirmadan ayaa ka caawin doonta dib u habeynta 300 xarumo go’doomin ah, 34 xarumood oo daaweyn iyo 100 xarumo karantiil oo karantiil ah, ayaa lagu yiri bayaan ka soo baxay AfDB.
“Barnaamijku wuxuu kordhin doonaa tirada shaybaarada baaritaanka ee COVID-19, wuxuu tababarayaa 45,000 shaqaalaha daryeelka caafimad ee jawaabta COVID-19, iyo kaalmaynta samaynta istiraatiijiyadda isgaarsiinta iyo istiraatiijiyadda ka qeybgalka bulshada si kor loogu qaado wacyiga ku saabsan gudbinta iyo ka hortagga,” Kamara ayaa yidhi.
Itoobiya waxay hirgalisay Qorshe Jawaabeed oo Degdeg ah oo heer qaran ah (CERID-19) kaas oo doonaya in lagu ballaariyo ilaalinta ilaalinta bulshada ee loogu talagalay kuwa ugu nugul, kor u qaadidda awoodda lagu xakameeyo cudurka, iyo wax ka qabashada isu dheelitir la’aanta ka dhasha miisaaniyadda. Waxay kaloo u muuqataa inay ka ilaalinayso waaxda gaarka ah waxyeellada faafitaanka faafa.
Lacagta ayaa sidoo kale yareyn doonta cadaadiska miisaaniyadeed ee ku yimaada dhaqaalaha Itoobiya, Kamara ayaa intaas ku daray, inay ka caawin doonto ganacsatada maxalliga ah iyo qoysaska nugul, gaar ahaan kuwa saboolka ah ee magaalooyinka.
“Barnaamijku wuxuu kaloo taageeri doonaa dawladda inay soo bandhigto kharashaadka aan qorshaysnayn ee loo diray xasilinta dhaqaalaha hoos yimaada NERP, iyo lacagaha loo qoondeyn doono si loo ilaaliyo ganacsiyada yaryar ee rasmiga ah iyo kan rasmiga ahba si loo ilaaliyo ku dhawaad ​​26,000 shaqo,” ayaa lagu yiri bayaanka.
Sida laga soo xigtay AfDB, kobaca dhaqaale ee Itoobiya waxaa la filayaa inuu udhaxeeyo 2.6 iyo 3.1 boqolkiiba, oo ka hooseeya ilaa 7.2 boqolkiiba, sababtuna waa carqalada ka dhaceysa masiibada.
“Faafida waxa kale oo la filayaa in ay si xun u saamayso waaxda khaaska ah, gaar ahaan dhinaca dhismaha, dhoofinta, iyo dalxiiska iyo waaxaha safarka. Waaxda dalxiiska ee Itoobiya waxay sheegataa 9.4% GDP waxayna shaqaalaysaa 2.2 milyan oo qof. COVID-19 ayaa la rajaynayaa in ay sii sii yareyso wax soo saarka, taas oo xannibaysa soo dejinta alaabada.
Laga soo bilaabo 3dii Luulyo, Itoobiya waxaa soo sheegey 5,846 xaaladood oo la xaqiijiyey, 103 dhimasho iyo 2,430 la soo nooleeyey, sida laga soo xigtay Africa CDC.
Previous articleSomalia: Police Command Provides Preliminary Details of the Bombing in Mogadishu
Next articleWarbixintii ugu danbeysay covid 19 somaliland
DEG DEG:-Qarax Miino Oo Ka Dhacay Muqdisho
Nuxurka Waraaqo Ay Kenya Iyo Soomaaliya Isweydaarsadeen Oo Sii Adkaynaya Khilaafka...